yarzar November 29, 2012 - 9:03 pm ဧရာဝတီကမဟုတ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန်ခွန်းအပြည့်အစုံကို ဖတ်ရပါတယ်။ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ တစ်ချို့ဒေါ်စုပြောသွားတဲ့ကစားတွေပေါ့။
Reply M M November 29, 2012 - 10:03 pm သမတ ရုံးဝက်ဆိုက်မှာ ဒီကိစ္စဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ ဒီလုပ်ရပ်က သမတမှာ တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသွားပြီ။
Reply ပြည်သူတစ်ယောက် November 30, 2012 - 7:04 pm သွားနေတဲ့လမ်းက မှန်နေတာကိုေ၇ှ့က ပိတ်လိုက်တော့…နောက်ပြန်လှည့်တော့မှာပေါ့..
Reply မင်းကြီးညို November 29, 2012 - 11:48 pm စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်ကလဲ ကွန်မင့်တွေရေးခဲ့တယ်။ ဟိုကိစ္စလဲဆန္ဒပြ
Reply Mon- Kayin November 30, 2012 - 12:22 am ဒေါ်စုရေ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဥက္ကဌလုပ်ရတာအခက်ခဲဆုံးအလုပ်ပဲ အစိုးရကလည်း
Reply minsoeaung November 30, 2012 - 1:07 am အထိကရုန်းဖြိုခွဲတာ ကလည်း ဘယ်သူမှမသုံးဘူးသေးတဲ့ လက်နက်နဲ့ ဖြိုခွင်းတာဖြစ်လို ဒဏ်ရာရသူများပါသည်။ ဒီလက်နက်ကိုောနောက်ထပ်ဘယ်နိုင်ငံမှမသုံးစေရန်တားပေးကြပါ။ ယခုသုံးစွဲပစ်ခတ်မိန့်ပေးသူကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ပေးသင့်ပါသည်။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 30, 2012 - 3:20 am ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းခံထားရသူတွေ အနှိပ်စက် မခံရပါစေနဲ့။
Reply Ko zaw November 30, 2012 - 8:21 am Help mommy Su
Reply U Maung Aung November 30, 2012 - 1:05 pm I write it again because I didn’t see previous comment I wrote.
Reply burmathwe November 30, 2012 - 2:59 pm အမေရယ် ကြိုးစားလည်း မလွယ်ပါဘူး…လွှတ်တော်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှု့ ကိုတင်ပြကြဖို့ အဆိုတင်သွင်းတော့ လည်း ပြင်းပြင်ထန်ထန် ကန့် ကွက်ကျတာဘဲလေ၊တိုင်ပြည်အတွက် အဖက်ဖက်က မသန့် ရှင်းဘူးဆိုတာ အကုန်သိနေတာဘဲလေ
Reply ဖိုးလုံး November 30, 2012 - 3:53 pm ဒေသခံတွေဆန္ဒပြတာကို မလိုလားဘူး။ တရုတ်ကြီးကိုလည်းကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မိတ်ပျက်မှာစိုးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီစီမံကိန်းက တကယ်ပဲ ပြည်သူ့အကျိုး တိုင်းပြည်အကျိုးရှိမဲ့ဟာဆိုရင် စာရင်းဇယားနဲ့ချပြလိုက်လေ။ မချပြရဲဘူးလား။ အဲ..ဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကို ငြိမ်သွားစေချင်တယ်၊ စီမံကိန်းလည်ဖျက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ဘ၀တွေကို အခုထက်ပိုကောင်းအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်ကြပေါ့။ အခုတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ်ပြည်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးဖို့မစဉ်းစားပဲ အဓမ္မအင်အားသုံးဖြေရှင်းတော့ လူကြားမကောင်းဖြစ်ကြရတာပေါ့။ ဒီလိုအစိုးရမျိုးကိုရော ဘယ်လိုပြည်သူမျိုးက ယုံကြည်အုံးမှာလဲ။
Reply burmathwe November 30, 2012 - 7:53 pm မင်းကြီးညို ခင်ဗျားပြောတာကိုလက်ခံတယ်..ဒါပေမယ့် ..အကုန်လုံးမပာုတ်ဘူး..လာအိုအစိုးရက နိုင်ငံပိုင်သံယံဇာတတွေနဲ့ သူနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်..သူနိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်သွားတာ၊အခု လူဝတ်လဲ တဲ့ လူတွေက..အရင် ၂၃နှစ်လုံး စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ သူ့ နေရာကနေပါဝင်နေတဲ့ သူကြီးဘဲ..ဦသန်းရွှေ နဲ့ ဦးမောင်အေး ဘဲအနားယူသွားတာ..အဲ့ ဒီအချိန်တည်းက အဲ့ ဒီလူတွေပာာ တိုင်ပြည်ပေါ်မှာ လာအို ကခေါင်းဆောင်တွေလို စိတ်ဓါတ်နဲ့တိုင်ပြည်ထူထောင်ေ၇းကို အဂတိတရား ကင်းကင်းနဲ့ လုပ်ခဲ့ မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျား နဲ့ ကျွန်တော်တောင် ဒီလိုအချိန်ကုန်ခံပြီး ကွန်မန့် ရေးနေစရာတောင်မလိုပါဘူး..ခင်ဗျုားပြောတဲ့အ၀တ်လဲအစိုးရပာာ မွေးရာပါအော်ရီဂျင်နယ် သူဌေးတွေလား..နိုင်ငံပိုင်သံယံဇာတတွေကို ဦးသန်းရွှေနဲ့ မောင်အေး ၂ယောက်တည်းယူပြီးထွက်သွားတာမပာုတ်ဘူး။အခုပာာက လူကော မူ ကောမယုံတာ..မူဆိုတာက မနေ့ တစ်နေ့ ကမှဖွဲ့တာဆိုတော့ တစ်ချိန်လုံးအမှောင်ထဲမှာ နေနေရတဲ့ ပြည်သူက အပြည့် အ၀နားမလည်သေးတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ လက်ခံမယ်။လူကိုကတော့ ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ကြဘူး၊ခင်ဗျားလည်းလွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်၊သေသေချာချာစဉ်းစာပြီမှရေးရင် ဒီမှာ ကွန်မန့် ရေးတဲ့ ဘော်ဒါတွေအားလုံး ခင်ဗျားရဲ့ IQကိုလေးစားသွားမှပါ…တာ့ တာ့ ဘော်ဒါ
Reply tsan001 December 1, 2012 - 5:46 am ကျွန်မမှာ အားနည်းချက်တွေရှိလို့ ဆိုရင်လည်း ၀ိုင်းပြီးတော့ ပြုပြင်ပေးကြပါ။ ကျွန်မ လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ ကလည်း သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ။ သဘောထားကြီးရမယ်။ ရေရှည်အမြင်ရှိရမယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ အဓိကလိုအပ်ချက်က အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးပဲ။
Reply kyimaungzaw December 1, 2012 - 7:23 pmိ်ဒေါ်စုနာက်ပြန်လှက်နိ်ုင်သည်